‘कसले चोर्‍यो मेरो मन-२’ बनाउँदै छवि ओझा, नायक नायिका को होलान् त?
Homeसमाचार‘कसले चोर्‍यो मेरो मन-२’ बनाउँदै छवि ओझा, नायक नायिका को होलान् त?
October 30, 2020 admin समाचार 12189
निर्माता छवि ओ’झाले चलचित्र ‘कस’ले चोर्‍यो मेरो मन-२’ बनाउन लागेका छन् । रिली’जको दश बर्षपछि ओझाले ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन-२’ बनाउन लागे’का हुन् । दश बर्ष अघि फिल्म’मा रेखा थापा र आर्यन सिग्दे’लले अभिनय गरेका थिए ।
फिल्मलाई अ’त्यन्तै मन पराइ’एको थियो । श्रोतका अ’नुसार यो चलचित्रमा रेखा र आर्यन नदोहो’रिने बताइएको छ । नयाँ कथामा चलचित्र बन्ने भएकोले नयाँ कला’कारहरु रहने बुझिएको छ ।
यो चलचित्र पनि ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ निर्देशन गरेका सबिर श्रेष्ठले नै निर्देशन गर्ने बताइएको छ । ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ दश बर्ष पहिले रेखा फिल्मस’को ब्यानर’मा बनेको थियो । ‘कसले चो’र्‍यो मेरो मन(२’ भने निर्माता ओझा’ले नयाँ कम्प’नी दर्ता गरेर बनाउन लागे’को बुझिएको छ ।-Osnepal बाट
June 8, 2022 admin समाचार 3024
April 15, 2022 admin समाचार 1025
जुन छोरालाई लाखौं उप`चार गरेर बचाए उनै छोराले बाबुको हात का टेर यस्तोसम्म गर्यो (भिडियो हेर्नु`स)
March 2, 2022 admin समाचार 1571
दोलखा जिल्ला भिनपा ८ बोछ्मा घर भएर बसो`बास गर्दै आएका धनबहादुर तामाङ नाम गरेका पुरुषको दु”खै”दुखले भरिएको जीवनकहानीले पक्कै पनि तपाईको मन छुनेछ । उनलाई आफ्नै छोराले खु”कु”रीले प्र”हार गरेको र दुईवटै हात रगता”म्मे बनाएर